Madheshvani : The voice of Madhesh - तनावमा उपेन्द्र !
तनावमा उपेन्द्र !
काठमाडौं, १५ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेश आन्दोलनका बेला लगाइएका झुठा मुद्दाहरु फिर्ता लिने निर्णय सार्वजनिक गरेलगत्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केही नेताहरु तनावमा परेका छन् ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेश आन्दोलनका १२० आन्दोलनकारीहरुमाथि लगाइएका विभिन्न १५ प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
ओली सरकारको यो निर्णयबाट जसपामा दुई विचारधारामा विभक्त एक समूहमा हर्ष देखिएको छ भने अर्को समूहमा ठूलो बज्रपात परेको छ ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलगायतले केही दिनयता मधेशका मुद्दाहरु सम्बोधनार्थ बारम्बार बालुवाटार धाइरहेका थिए । अर्कोतिर केपी ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनैपर्ने भन्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनकारी रहेको, उनले कुनै पनि हालतमा मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्दैन लगायतका कुराहरु सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका थिए । तर महन्थ–राजेन्द्र पूर्ण विश्वस्त थिए कि माग सम्बोधन हुन्छ ।
किनभने आवश्यकता र औचित्य ओलीले महसुस गरेको र माग सम्बोधन गर्न बाहेक कुनै विकल्प नरहेको महन्थ र राजेन्द्रले राम्ररी बुझिसकेका थिए ।
उपेन्द्र यादवले यही ओली सरकारसँग लिखितरुपमै सहमति गरेर सरकारमा उपप्रधानमन्त्री दिँदा उनको हैसियत एउटा राज्यमन्त्रीभन्दा बढी देखिएको थिएन । एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म ओली सरकामा उपेन्द्र बस्दासम्म कहिल्यै पनि आफूले गरेको सहमतिबारे पहल गरेनन् । तर जब आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन ओली सरकारको नै आलोचना गर्न थालेपछि अपमानजनक बहिर्गमन भयो ।
सोही अपमानजनक बहिर्गमनको बदलाभावका कारणले उपेन्द्रले ओलीलाई हटाउने अभियानमा जुटेका थिए । जसरी पनि ओलीलाई हटाउनै पर्ने अभियानमा उपेन्द्र लगभग असफल नै भइसकेका छन् ।
आफू सरकारमा भएर एउटा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेन तर महन्थ र राजेन्द्र्र सरकारबाहिर भएर पनि मागहरु पूरा भइरहेको हुँदा उपेन्द्र तनावमा पर्दै गइरहेका छन् । यतिबेला उपेन्द्र तनावमा रहेको कतिपयको भनाइ छ ।